Ningbo Hilectro Power Teknolojia Co., Ltd no tena raharaha Haïti Drive, izay manokana ny mpanamboatra ny herinaratra forklift, stacker, tontolo fiara, sns golfcart ny orinasa dia manaraka ny filozofia ny Haitiana Group "High Quality, sy ny fahaiza-miasa mahomby avo angovo famonjena ", ary mikendry manome ny tsara indrindra ao amin'ny kilasy ho an'ny mpividy entana.
Ny orinasa no misy ao amin'ny orinasa Zone ny Beilun izay iray amin'ireo seranana lehibe indrindra manerana izao tontolo izao. Ny faritra ny orinasa no nandrakotra thous 110 metatra toradroa. Amin'ny famokarana fitaovana maro andalana izay fahafahana isan-taona dia mihoatra ny 10 thous milentika ny forklifts, ny orinasa manana ny mandroso fitsirihana foibe tamin'izany andro izany.
Nivory tamin'ny mpanara-maso ny asa, ny orinasa manana avo R & D farany ekipa. Amin'ny alalan'ny fanakambanana ny ao an-toerana sy any ampitan-dranomasina traikefa, ny ekipa dia fanatsarana ny kalitaon'ny ny forklifts hatrany, ary miezaka ny ho laharana an-tampon'ny mpamatsy ao amin'ny orinasa.
Single AC maotera fiara CPD30KJ